China China Draft Cowing Towers na akụkụ anọ ọdịdị Manufacturer na Supplier | Yubing
Kpụrụ nke Ọrụ:
A na-agbanye mmiri na-ekpo ọkụ site na ebe okpomọkụ na usoro nkesa mmiri n'elu ụlọ elu ahụ site na ọkpọkọ. A na-ekewa mmiri a ma kesaa n'elu mmiri mmiri site na nkesa mmiri dị ala. N'otu oge, a na-adọta ikuku site na ikuku ntinye nke ikuku na isi nke ụlọ elu ahụ ma na-aga elu site na mmiri jupụtara na mmiri nke na-abụghị nke mmiri ahụ. Obere akụkụ mmiri na-ekpo ọkụ nke na-ewepu okpomọkụ na mmiri fọdụrụ. A na-adọta ikuku mmiri na-ekpo ọkụ n'elu ụlọ elu ahụ dị jụụ site na onye fan ma wepụ ya na ikuku. Mmiri mmiri ahụ dị mma na-adaba na bezin na ala nke ụlọ elu ahụ wee laghachi na isi iyi ọkụ. Nzube a (ikuku ikuku na-agbanwe) na-atụle ikuku ọkụ na-aga elu ma enwere ụfọdụ ụzọ dị n'agbata ikuku ọhụrụ na oghere ikuku mmiri na-ekpo ọkụ iji belata ohere nke imegharị ikuku.
Uru nke Open Circuit Cooling Tower:
Mbelata ikike oriri (ọ bụ ụlọ elu kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ)
Obere Mmetụta Gburugburu Ebe Obibi (operationda olu dị ala na ezigbo ndị na-akwado ya)
Inogide na Light-arọ maka Easy nwụnye na Mmezi.
Structure Nguzogide Nzuzo iji zute ikuku na ebumnobi.
Nhọrọ ngbanwe na isi ihe maka ọrụ ndị eji aka rụọ.
Nhazi na Panels
ICE ọkọlọtọ jụrụ ụlọ elu jiri ọhụrụ ukwuu corrosion na-eguzogide ntekwasa ígwè mpempe akwụkwọ nke iso zinc dị ka isi mkpụrụ, na Nchikota na Al, Mg na a Chọpụta nke sịlịkọn.
Nchara (otu ihe ahụ dị ka ogige ahụ) efere zuru ezu na mkpọda mkpọda mkpọda iji zere nkwụsị mmiri. O mejuputara njikọ nchapu mmiri na nzacha mgbochi vortex, njikọ ọgbụgba na njubiga ókè, njikọ mmiri mejupụtara na valvụ ụgbọ mmiri, nkụkọ ikuku ikuku PVC agbasiri ike na ọkpọkọ ọbara.
Wet Deck Dejupụta / Okpomọkụ Exchanger
AKW rectKWỌ AKW coolingKWỌ AKW rectKWỌ ICE nwere akụkụ nke herringbone na-eme ka ihe jupụtara na mmiri jupụtara na PVC mechiri ọnụ ma kwekọọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji bulie ọgba aghara nke mmiri iji mee ka arụmọrụ nke okpomọkụ ahụ dịkwuo elu.
ICE na-emeghe ụlọ elu ikuku na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ndị na-agba ọsọ ọhụụ, nwere ikike na-agbanwe agbanwe na akara nwere ike ịkọwapụta profaịlụ dị elu. Ogologo ụda Fans dị na ina.
Nke gara aga: Bottle Type Counter-flow Cooling Towers
Osote: Cross-flow Emechiela Circuit Cowing Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers
Plọ elu jụrụ oyi FRP
etinyere draft jụrụ ụlọ elu
ulo oru jụrụ ụlọ elu
emeghe ụlọ elu jụrụ
mepee ụdị jụrụ ụlọ elu
Akụkụ anọ Open ụdị jụrụ ụlọ elu
ụlọ elu jụrụ oyi nke mmiri
Ihe eji eme ka ndi mmadu megharia ulo oru ike ...
Cross-eruba Emechiela Circuit jụrụ Towers / Evap ...
Counter-eruba Emechiela Circuit jụrụ Towers / Ev ...